Si otomaatig ah u tijaabi oo u wanaaji barnaamijkaaga moobilka leh sacab | Martech Zone
Tijaabi otomaatiga sacabka waa adeeg bixin buuxda oo xaqiijineysa in moobilkaaga iyo barnaamijyada websaydhku ay si joogto ah u dhaqmayaan min hal dhismo ilaa kan xiga. Had iyo jeer waxaan dadka u sheegaa in haddii aad wax naqshadeeysid ama aad horumariso oo aad weydiisato jawaab celin, runti waxaad helaysaa jawaab celin aan loo baahnayn oo aan tayo iyo tiro toona lahayn. Weydiinta qof inuu jawaab ka bixiyo waxay la mid tahay weydiinta, "Wax khalad ah ma ku heli kartaa tan?" iyo imtixaanka isticmaalaha wuxuu ka socdaa isticmaalka caadiga ah oo kaliya raadinta cillad.
Helitaanka barxad aad ku tijaabin karto dalabkaaga tiro ahaan si aad uhesho jawaab celin tayo leh waxay hubin doontaa inaad u wareejineyso barnaamijkaaga jihada saxda ah, hagaajinta korsashada, iyo ugu dambeyntii yareynta suuqgeynta iyo qiimaha horumarinta. Sacabku wuxuu leeyahay ebook aad u wanaagsan, 5 Ways oo aad ugu guuleysato Mobile Mootation kaas oo faahfaahinaya xaddidaadaha iyo hababka ugu fiican ee otomaatiga tijaabada moobilka - hubi inaad soo dejiso.
Qalab Imtixaanka Moobilka Qalabka ah ee Sacabada
Qalabka baaritaanka sacabka waxaa ka mid ah:
Qaab-dhismeedka Qalabaynta Sacabka - oo ay dhisteen injineerro otomaatig khabiir ku ah kuna saleysan luqadaha iyo qalabka ay horkacayso warshadaha. Lagu sharfayo sannado badan oo waayo-aragnimo ah, qaab-dhismeedku wuxuu sameeyaa tijaabooyinka barnaamijkaaga oo si dhakhso leh u socda oo ku sii haya inay ku sii socdaan iskudhaf kasta oo ah Websaydh, iOS, iyo Android.
Sacab bulshada tijaabada adduunka - injineerro otomaatig khibrad u leh sannado badan oo u shaqeeya shirkadaha waaweyn ee adduunka. Macaamiisha otomaatiga ah waxaa loo xilsaaray koox u heellan xaqiijinta guushaada maareynta qaabdhismeedka, aaladaha, iyo isdhexgalka, qor kiisaska imtixaanka iyo qoraallada, oo kormeera tijaabo kasta. Fadhiiso oo isdeji intaanu kormeerayno caafimaadka barnaamijkaaga.
Dashboard otomaatiga ah - aragti dagdag ah caafimaadka barnaamijkaaga hadda iyo wixii laso dhaafay. Immisa cayayaan ah ayaan kashifnay, intee boqolkiiba imtixaannadeennii la soo dhaafay, ma soo hagaageynaa mise waan ka sii darayaa? Fur dashboardka oo soo ogow.
Tags: sacabotomaatiga barnaamijka mobiladatijaabada moobilkaqoraalka tijaabada moobilkatijaabinta dalabka moobiilkashaashadda tijaabada
Jul 2, 2015 markay tahay 3:06 PM
Marka ay timaado suuq geynta barnaamijka mobilada, otomatiggu waa furaha. Kama filan kartid inay dadku kula macaamilaan adoo adeegsanaya qalabka moobiilka haddii aadan soo dirin macluumaad aqoon iyo shaqsiyan u qalma. Xaqiiqdii waxaan u maleynayaa inaan arki doono wax badan oo ka mid ah tijaabinta otomaatiga mustaqbalka dhow, tani waa wax weyn!